Daawo:Weerar lagu qaaday garsoore dhexdhaxaadinayey ciyaar horyaalka Itoobiya… – Hagaag.com
Daawo:Weerar lagu qaaday garsoore dhexdhaxaadinayey ciyaar horyaalka Itoobiya…
Posted on 2 Maajo 2018 by Admin in Sports // 0 Comments
Arin layaab leh ayaa ka dhacday horyaalka dalka Itoobiya kadib markii koox ka ciyaarta Horyaalka dalkaasi ay weerar ku qaadeen garsoore dhax dhaxaadinayay Ciyaar Horyaalka katirsan.
Kulan u dhaxeeyay kooxda Milatariga Itoobiya iyo Kooxda Jaamacada ee Welwalo Adigrat ee Horyaalka dalka Itoobiya ayaa fowdo kusoo dhamaatay kadib markii ciyaartoyda kooxda Jaamacada weerar ku qaadeen garsooraha kulankan.
Garsooraha ciyaartan ayaa xili labada koox bar baro ahaayeen waxa uu gool muran dhaliyay u ansixiyay kooxda Milatariga, waxaana tilaabadaasi ka carooday ciyaartoyda kooxda kale kuwaa oo eryaday tababaraha gacantana ula tagay.
Ururka kubadda cagta ee Itoobiya ayaa joojiyay dhammaan cayaarihii socday, waxaa sidoo kale shaqada laga eryayay tababarihii kooxda Welwalo Adigrat ee weerartay garsoorahana .
Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arkayay Garsooraha ciyaartan oo la eryano iskuna difaacaya usha suran kornerka, waxaana tilaabadan ay ciyaartoyda ku dhaqaaday si weyn uga xumaaday taageerayaasha kubada cagta Itoobiya.
Horyaalka dalka Itoobiya waxaa horey uga dhacay qalalaaso badan , hasa ahaatee dhacdadan ugu dambeysay ayaa noqotay mid si weyn loogu baahiyay Warbaahinta iyo baraha bulshada.